Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 10:13 PM
ဟုတ်ပါ့ဗျာ.. အသိနဲ့အကျင့်ထပ်တူမကျရင်တော့ ဘာတရားမှလည်းရှိလာမှာ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ သိသာသိပြီး အကျင့်မပါရင် ရေပေါ်အရုပ်ဆွဲသလို ဖြစ်သွားမှာပါ။ သတိပညာပေးပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ..။
အင်း.. သိပ်ကောင်းပါတယ် မမရေ...
အသိနဲ့ သတိ ထပ်တူကျရမှာပေါ့..
ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) said...
Sis, You wrote this poem ? Let me share on my blog. I also presenting အသိ and သတိ
I really like your blog and Dhama aricles.
Shell we exchange blog link?
ကဗျာအောက်မှာ မထက်စုနှင်းဆီ အမည်နှင့် blog လင့်ခ်ပါတင်ပေးထားပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
sorry နော်.. အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ကွန်မန့်ကို ခုမှ ဖတ်မိလို့၊ ခွင့်တောင်းထားတာ မသိလိုက်တာပါ။ ကဗျာတွေ ယူသုံးလို့ရပါတယ်။ Share ပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။